Yemincamo ingabekwa ukwenza izinto eziningi: ubucwebe, yezandla, izinto zokuhlobisa, izikhwama, izimbali nokunye. Sikunikeza kwamanye amakilasi master, uchaza indlela yokwenza Christmas imihlobiso lobuhlalu ezokwenza ziyakhazimula ngaphansi nemiklamo ukukhanya futhi washaywa ngemuva kwesikhathi.
Snowflakes njengoba bead Christmas ithoyizi
Master-class ekwenzeni eqhwa:
Uzodinga line ukudoba, amashiya, ezimbili izinhlobo ubuhlalu (one emikhulu kanye esincane) lace, okuyinto izomiswa Hack (isithombe 1).
Nanizhite ubuhlalu ezinhlanu ezincane wire, intambo zokugcina eyodwa ongale kocingo ukuthola loop (isithombe 2).
nanizhite Landelayo ngakolunye uhlangothi ube bead esikhulu ezincane ezinhlanu, bese owodwa ngaphezulu. Dabulani bead lokugcina nezinye ongale kocingo simise elinye iluphu (isithombe 3).
Ngokufanayo, ukwenza omunye iluphu, kodwa manje akudingeki ukuba agqoke bead wokuqala omkhulu (isithombe 4).
Lapho usunayo izihibe ezinkulu ezinhlanu, uzokwenza enye. Ngenxa yalesi string kwenye ongale kocingo ubuhlalu ezintathu, kanti lawa amanye amabili. Ngemva kwalokho, slide yesibili ukuqeda ngokusebenzisa bead yesithathu ngolokuqala wire iluphu bese qinisa (isithombe 5).
Yenza ezintathu indandatho lobuhlalu ezine ezincane, njenge esithombeni 6.
Manje Dlula emikhawulweni wire ngokusebenzisa ubuhlalu uhlangothi, ngakho aphumile phezu ring yesibili (isithombe 7).
On Uhlangothi ngalunye nanizhite ubuhlalu ezintathu idlule ukuthi kusukela lapho line ukudoba (isithombe 8).
wire Lower ngokusebenzisa bead phansi (isithombe 9).
Lokukhipha wire eduze Lobe maphakathi (isithombe 10).
Thatha ku ngamunye isigcebe sembali izihibe phezu verhushechke, njengoba kuchaziwe esigabeni sama 6-10 (isithombe 11).
Thread nomchilo noma iribhoni (isithombe 12).
Isihlahla ithoyizi ubuhlalu ngomumo!
Nice kakhulu Christmas imihlobiso yemincamo ingabekwa eyenziwe ngezandla zakho esime Christmas amagoda ezimbali. Benza esicacile:
Lungiselela ucezu wire, ubuhlalu oluhlaza (mhlawumbe side noma nje esikhulu), ubuhlalu abomvu amancane futhi omunye bead ezinkulu esiliva noma umbala igolide.
Bakha indilinga wire. Omunye ekupheleni ukugoqa emhlabeni nezinye, kanti umsila yesibili wenze okungaphezu (Figure 1).
Igcine omunye ngocingo eduze imisila iringi (Figure 2).
Nanizhite olungeziwe oluhlaza bead wire (Figure 3).
Cindezela ngokuqinile iringi bead (Figure 4).
Songa wire emhlabeni iringi ukuze umsila yabuya (Figure 5).
Nanizhite omunye bead oluhlaza (Figure 6).
Nanizhite buhlalu belinani oluhlaza, njalo evala wire emhlabeni indandatho. Ngenxa yalokho, kufanele lahlukene izidingo kumele yentiwe ubuhlalu (Umfanekiso 7).
Khona-ke umoya wire emhlabeni umsila esisele esisodwa (Umfanekiso 8).
On nanizhite obomvu wire bead (Figure 9).
Nanizhite a ubuhlalu ezimbalwa obomvu futhi wenze iluphu (Figure 10).
Yenza olunye iluphu obomvu ohlangothini lwesokudla. Khona-ke qedani wire emhlabeni esiyingini nanizhite zokugcina bead oluhlaza (Figure 11).
Vikela ekupheleni wire ubuhlalu hhayi iqhakazile na.
Hack ku isihlahla sikaKhisimusi ulungile!
Hlobisa Christmas ibhola ubuhlalu
Namanje akakwazi ukwenza izihloko lonke kusukela ubuhlalu, kodwa nje ukuzisebenzisa ukubuyekeza ubudala, yisicefe futhi walahlekelwa umbono elihle Christmas imihlobiso. Sobuhlalo kufanelekile Wabasaqalayo master class ekwenzeni lace capes ibhola.
Thatha ubuhlalu ezimbili ezihlukile sinye futhi ubuhlalu inkudlwana. Futhi uzodinga zokwakha beading futhi ibhola Christmas.
Yenza indandatho lobuhlalu elincane ezihlukile. umbala i-Alternate kungaba ezingafanele. Ngokwesibonelo, ubuhlalu oluhlaza kwabayisithupha kanye nowesifazane oyedwa izikhathi baba mhlophe, nanxa eziningana ngakho. I ring kumele amboze phezulu ibhola Christmas.
Tie ifindo eyodwa ongale kocingo futhi uhala ke ngokusebenzisa ubuhlalu ezimbalwa (Figure 1).
I ekhishwe wire nanizhite ubuhlalu nomaphi ngombala kanye nosayizi futhi wenze iringi, edlulisa line ngokusebenzisa bead ngowokuqala iketango (Figure 2). Ukuphakama indandatho entsha ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane ubukhulu ibhola.
Dlula ingxenye line ukudoba has ubuhlalu (Figure 3).
String ku wire ubuhlalu engaphansana nje kwengu-isikhathi esedlule (Figure 4).
Dlula lozalo pair of ohlangothini engumakhelwane ubuhlalu ringlet (Figure 5).
Nanizhite ubuhlalu ezimbalwa futhi ukuchusha umugqa ngokusebenzisa bead kuqala uchungechunge (Figure 6). Ngenxa yalokho, uqhela lepestochek.
Yenza amacembe eziningana okufanayo kulo lonke ubukhulu esiyingini lokuqala (Umfanekiso 7).
Lokukhipha ukuphela tekusebenta line ukudoba ngokusebenzisa olunye uhlangothi Lobe zokugcina (Umfanekiso 8).
Beka obuciko bead string ku ukuphela zokusebenza ubuhlalu line ukudoba, amakhophi ukuze umbala iringi lokuqala (Figure 9).
Yeqa umugqa ngokusebenzisa aphansi Lobe ubuhlalu (Figure 10).
Ngenxa yalokho, kufanele uthole indandatho sidlula bunye buhlalu ithebhu ngayinye (Figure 11).
Tie ifindo emgqeni.
I olusha isihlahla ithoyizi ubuhlalu ngomumo!
Okunye imiklamo yala amabhola
Ungenza ngokuphelele yimuphi imihlobiso kusukela ubuhlalu. Okokuqala, qiniseka iringi kuqala futhi ubuhlalu ke ngezikhathi alengiswe, usayizi ezahlukene kanye nombala ngamaketanga okwakuthandelene amasongo phakathi kwabo, wenze ukumiswa kusuka phansi nokunye. Njengoba isizathu ungasebenzisa cebo ukwelukwa namasongo imigexo.
Santa Claus kusukela ubuhlalu
Indlela yokwenza Christmas ithoyizi ubuhlalu esime Santa Claus? Inqubo esebenza ngendlela elandelayo:
Thatha ubuhlalu imibala ebomvu, abamnyama, abamhlophe kanye beige.
Ngezinye phakathi ubude ubuhlalu black wire nanizhite eziyisishiyagalombili, futhi elimhlophe phakathi.
Khona-ke nanizhite inani elifanayo ubuhlalu futhi kudlulele ngalé kwawo a ongale kocingo yesibili.
Une ezimbili zezitokisi ezingu-ubuhlalu.
Ngokufanayo, ukwenza yonke imigqa okwalandela. Lokho esiphethweni esisodwa lobuhlalu ahlukaniswe ku oyifunayo umbala ukulandelana bese badabula ekupheleni wayo wesibili umugqa.
Umbala ubuhlalu futhi inqubo Stringing, ungakhetha noma iyiphi, isibonelo, njengoba esithombeni ngenhla. Into esemqoka ukuthi ekugcineni you phetho Santa Claus.
Phezulu ifindo tie futhi wenze iluphu, okuyilona elidingekayo ukuze kudlule iribhoni ukuba yezandla kungenziwa elenga isihlahla sikaKhisimusi.
Lokhu sikakhusimusi kungenziwa kalula kakhulu, futhi umphumela uba ithoyizi yoqobo isihlahla sikaKhisimusi. Vele uthathe wire uqweqwe balugicite Kuvunguza. Khona-ke cabaza bentambo, njengoba kuboniswe ngenhla, futhi nanizhite ubuhlalu oluhlaza. On ngezansi ungakwazi hang a bead enkulu njalo, uyithekeleze umnsalo kancane phezulu. Yenza kryuchochek okuyiwona isihlahla ithoyizi bead uzobe zigqokwe isihlahla sikaKhisimusi.